Shariif Xasan iyo AMISOM Oo Is khilaafsan (Warbixin). | Anti-Tribalism
← Xildhibaan Ka Tirsanaan Jiray Baarlamaanka Puntland oo Xabsiga Boosaaso Loo Taxaabay ka dib Markii uu Dhaleeceyn usoo Jeediyey Xukuumada Faroole
Gen. Samantar: Faroole maalin kuma darsan karo waxii ka dhaca deegaanka reerka iskaga ayaa ka masuul ah →
Shariif Xasan iyo AMISOM Oo Is khilaafsan (Warbixin).
24 March 2012 – Khilaaf xoogan ayaa soo kala dhaxgalay shariif Xasan iyo taliska ciidanka AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho kaasi oo ku aadan qaabka uu cadawgu usii heysan karo magaalada Baydhabo. Socdaal uu shariif Xasan ku tegay magaalada Baydhabo ayaa murun xoogan ka dhax dhaliyay saraakiisha ciidanka AMISOM iyo xafiiska baralamanka.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in AMISOM ay gadaal ka riixayaan qorshayaal ciidanka Itoobiya looga saarayo magaalada Baydhabo si looga fogaado xasaasiyad ay qaadaan shacabka Soomaalida taasi bedelkeena waxaa laqalqaalinayaa in ciidan kale oo shisheeye Baydhabo lageeyo.
Shariif Xasan ayaa diidan qorshaha AMISOM wuxuuna doonayaa in magaalada Baydhabo ay kusii sugaanaadaan ciidanka Itoobiya wuxuuna aaminsanyahay in ciidanka Itoobiya haddii ay baxaan ay dayacmi doonaan xaafadaha Baydhabo.
Xildhibaan Cali Afgooye oo wareysi siiyay Idaacad laga dhageysto Muqdisho ayaa yiri “AMISOM waxba kama qaban karto Baydhabo R/wasaare nooma ahan Gaas oo wuxuu R/wasaare u yahay Puntland”!. Wariyihii wareysanayay xildhibaanka ayaa weydiiyay “Oo Itoobiyaanka miyaad Digil iyo Mirifle ka dhiganaysaan halka shariif sheikh Axmed uu AMISOM Hawiye u xisaabsanayo”!!.
Cali Afgooye ayaa ku jawaabay sidaas u fasiro halkan oo Baydhabo ah ciidanka Itoobiya loogama maarno wuxuu intaasi sii raaciyay in shariif Xasan iyo Itoobiya walaala yihiin oo aysan jirin diin iyo dhaqan kala geynaya. Inkastoo ay ciidanka Itoobiya shariif Xasan Baydhabo qabteen bishii Febaraayo ee lasoo dhaafay hadane magaalada ma joogaan dad la maamulo balse shariif Sakiin ayaa ka dhiganaya Gidaar siyaasadeed oo uu shariif Axmed kula loomo.